Iindaba-Inyaniso malunga neflash yendalo esingqongileyo kunye nemveliso
Inyaniso malunga nokukhanya kwendalo kunye nokuvelisa
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ezinye izinto ezintle zenzekile kwicandelo lobuhle obuluhlaza. Ayisiyiyo kuphela ukufikelela kukhetho oluninzi olucocekileyo nolungena tyhefu lolusu, ukhathalelo lweenwele kunye nezinto zokuthambisa, kodwa sibona iimveliso zitshintsha ukugxila kwazo ekwenzeni iimveliso ezizinzileyo kunye nokupakisha, nokuba zinokuphinda zisebenze, zinokuphinda zisebenze okanye zinokuphinda zisetyenziselwe ukubola.
Ngaphandle kwale nkqubela phambili, kubonakala ngathi kukho isithako esinye sezithako zobuhle, nangona sesinye sezona zithako zonakalisayo kokusingqongileyo: ubumenyemenye. Bezinto isetyenziswa ubukhulu becala kwizithambiso nakwinzipho yeenzipho. Ikwayinto ethandwayo kwiimveliso zethu zokuhlamba, i-sunscreens kunye nokhathalelo lomzimba, oko kuthetha ukuba iya kuthi ekugqibeleni ingene kwiindlela zethu zamanzi kwaye isiphathe njengoko ibalekela kumjelo wamanzi. Iplanethi ibangele umonakalo omkhulu.
Ngethamsanqa, kukho ezinye iindlela ezinobuhlobo kokusingqongileyo. Nangona singenakuba nawo nawaphi na amatheko eeholide okanye imithendeleko yomculo kwikamva elibonakalayo, ngoku lixesha elifanelekileyo lokutshintsha kwizinto zeplastiki. Apha ngezantsi, uya kufumana isikhokelo esinoxanduva (ngamanye amaxesha sinzima).
Ukuza kuthi ga ngoku, siyazi ngokupheleleyo ingxaki yomhlaba yongcoliseko kunye nefuthe elibi leplastiki elwandle. Ngelishwa, i-glitter efumaneka kubuhle obuqhelekileyo kunye neemveliso zokhathalelo lobuqu ngoyena nobangela.
“Ubumenyemenye bendabuko ngokuyintloko buyimicroplastic, eyaziwa ngeziphumo eziyingozi kwindalo esingqongileyo. Yiplastikhi encinci encinci, ”utshilo umsunguli weAether Beauty kunye nentloko yangaphambili yeSephora kwisebe lophando lokuzinza nophuhliso uTiila Abbitt. “Xa la masuntswana acocekileyo efumaneka kwizithambiso, amiselwe ukuhla ngemijelo yethu yokuhambisa amanzi amdaka, agqithe ngokulula kwinkqubo nganye yokuhluza, kwaye ekugqibeleni angene kumanzi ethu nakwiinkqubo zolwandle, ngaloo ndlela kwandisa ingxaki ekhulayo yongcoliseko lwe-microplastics. . ”
Kwaye ayipheleli apho. “Kuthatha amawaka eminyaka ukubola nokubola kwezi microplastics. Baphazama ngokutya kwaye batya iintlanzi, iintaka kunye neplankton, batshabalalisa izibindi zabo, ezichaphazela indlela abaziphethe ngayo, kwaye ekugqibeleni bakhokelela ekufeni. . ” UAbitt watsho.
Oko kwathethi, kubalulekile ukuba iimveliso zisuse i-glitter esekwe kwiiplastikhi kwindlela yazo kwaye inyukele kukhetho oluzinzileyo. Faka i-flash enokubola.
Njengoko ibango labathengi lokuzinza kunye ne-aesthetics liqhubeka nokukhula, iimveliso zijikela kwizithako eziluhlaza ukwenza iimveliso zazo zibe mhle ngakumbi. Ngokuka-Aubri Thompson, usokhemisi ococekileyo kunye nomsunguli weRebrand Skincare, zimbini iintlobo ze "eco-friendly" glitter esetyenziswayo namhlanje: isityalo-based kunye nezimbiwa. Uthe: “Izinto ezibengezelayo zivela kwiselulosi okanye kwezinye izinto ezihlaziyiweyo, emva koko zinokudaywa okanye zigqitywe ukuze kuveliswe imibala.” “Ukukhanya okusekwe kwizimbiwa kuvela kwizimbiwa ze-mica. Banayo iridescent. Ezi zinokumbiwa okanye zenziwe ilabhoratri. ”
Nangona kunjalo, ezi zinto zinokubengezelela ngokwesiko azilungelanga iplanethi, kwaye enye indlela inokubunzima kwayo.
I-Mica yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu ekukhetheni izimbiwa, kwaye ishishini elingemva kwalo limnyama. UThompson uthe nangona kunjalo, yinto yendalo engabangeli microplasticity yomhlaba, kodwa inkqubo yezemigodi esemva kwayo yinkqubo yamandla enamandla enembali ende yokuziphatha okungahambelaniyo nokuziphatha, kubandakanya nokuqeshwa kwabantwana. Kungenxa yoko le nto iimveliso ezinje ngeAether kunye neLush ziqala ukusebenzisa i-mica eyenziweyo okanye i-synthetic fluorophlogopite. Izinto ezenziwe elebhu zithathwa njengezikhuselekileyo yiphaneli yokuphonononga isithako sokuthambisa, kwaye icocekile kwaye ikhanya ngakumbi kune-mica yendalo, ke iya isiba ngakumbi nangakumbi.
Ukuba i-brand isebenzisa i-mica yendalo, jonga (okanye ubuze!) Ukuqinisekisa ubonelelo lwayo lokuziphatha. Zombini i-Aether kunye ne-Beautycounter zithembisa ngokufumana imica efanelekileyo xa zisebenzisa izinto zendalo, kwaye le yokugqibela isebenza ngokukuko ukwenza utshintsho olulungileyo kwishishini le-mica. Kukwakho nezinye iindlela zokuziphatha ezinokufunyanwa kwimithombo yezimbiwa, ezinje nge-calcium calcium borosilicate kunye ne-calcium aluminium borosilicate, ezenziwa ngeglasi encinci, ekhuselekileyo yamehlo ekhusela iiglasi kunye nesimbiwa sombiwa kwaye zenziwe ngeeBrand ezinje ngeRituel de Fille zisetyenziswa kwizithambiso.
Xa kuziwa kubumenyemenye obusekwe kwizityalo, izityalo zihlala zisetyenziswa kwizinto "ezinokuboliswa yintsholongwane" kunye nemveliso yejeli namhlanje, kwaye le meko iba nzima. Iselulosi yayo ihlala ithathwa kwimithi yomthi onzima njenge-eucalyptus, kodwa, njengoko kuchaziwe nguThompson, zezinye zeemveliso ezinokuboliswa ziintsholongwane. Iiplastikhi ezininzi zisaqulathe isixa esincinci seplastiki, zihlala zongezwa njengombala kunye nokuhonjiswa kwetyhubhu, kwaye kufuneka kwenziwe umgquba kwimizi-mveliso ukubola ngokupheleleyo.
Xa kufikwa kubumenyemenye bokubengezela kwebhola, ukucoca okuluhlaza okanye ukuthengisa okukhohlisayo kuqhelekile phakathi kweempawu zobuhle kunye nabavelisi ukwenza iimveliso zibukeke zinobungqongileyo kunoko zinjalo. "Ngokwenyani, le yingxaki enkulu kumzi mveliso wethu," utshilo uRebecca Richards, igosa lezonxibelelwano eliyintloko (eneneni) lophawu lwebioGlitz olunokuboliswa ziintsholongwane. “Sidibene nabavelisi abaxoka besithi benza izinto ezibengezelayo ezinokuboliswa ziintsholongwane, kodwa enyanisweni benza ubumenyemenye obabunokubakho kumzi mveliso. Esi ayisosisombululo kuba siyazi ukuba umgubo obengezelayo awunakuze ungene kwicandelo lomgquba. ”
Nangona "icompostable" ivakala njengokukhetha okuhle ekuqaleni, kufuna ukuba umntu onxibileyo aqokelele onke amabala emveliso asetyenzisiweyo aze awathumele ngaphandle-into eqhelekileyo abalandeli beflash abangenakuyenza. Ukongeza, njengoko u-Abbitt esitsho, inkqubo yokwenza umgquba izothatha ngaphezulu kweenyanga ezilithoba, kwaye phantse akunakwenzeka ukufumana indawo enokwenza nantoni na ngeli xesha.
“Sivile kananjalo nangezinye iinkampani ezithi zithengisa izinto zokuhombisa eziyinyani ezinokuboliswa ziintsholongwane, kodwa zixutywe nezinto ezibengezelayo zeplastikhi ukunciphisa iindleko, kunye neenkampani eziqeqesha abasebenzi bazo ukuba bachaze izinto zabo ezimenyezelayo njengezinto“ ezinokuthotywa ”. Babhidisa ngabom abathengi abasenokungazi ukuba “Zonke iiplastikhi ziyahlazeka, nto leyo ethetha ukuba iyakuqhekeka ibe ziingceba ezincinci zeplastiki. “Wongeze watsho uRichards.
Emva kokunxibelelana namabali eemveliso ezininzi, ndothuswa kukufumanisa ukuba olona khetho luthandwayo eneneni lunesixa esincinci seplastiki kwaye kuphela kwinqanaba lokuqala kuluhlu "lweemveliso ezibengezelayo ezibolayo", kodwa ezi plastiki azifane zithengiswe. Ifihliwe njengezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, ezinye zide zaziguqula njengeemveliso ngaphandle kweplastiki.
Nangona kunjalo, uphawu alusoloko luphosakele. UThompson uthe: "Kwiimeko ezininzi, oku kubangelwa kukungabikho kolwazi kunokuba nobubi." “Amanqaku adlulisela ulwazi kubathengi bawo, kodwa iimveliso zihlala zingenakubona imvelaphi nokulungiswa kwezinto zokwenza imveliso. Le yingxaki kumzi mveliso wonke kude kube luphawu olunokusonjululwa kuphela xa abathengisi kufuneka babonelele ngokucacileyo. Njengabathengi, eyona nto sinokuyenza kukujonga izatifikethi kunye neempawu ze-imeyile ngolwazi oluthe kratya. ”
Olunye uphawu onokuluthemba kwi-biodegrade uqobo yi-BioGlitz. Ukuqaqamba kwawo kuvela kumenzi weBioglitter. Ngokuka-Richards, olu hlobo luphawu lokuqaqamba olubolayo kwihlabathi liphela. I-eucalyptus cellulose evunyiweyo icinezelwe kwifilimu, idayiwe ngombala wendalo wokuthambisa, emva koko isikwe ngokuchanekileyo kubungakanani bamasuntswana. Olunye uhlobo lwezinto ezithandwayo ezisekwe kwizityalo ezinokuboliswa ziintsholongwane ngokupheleleyo (nangona kungacaci nokuba kusetyenziswe i-Bioglitter) kubandakanya i-EcoStardust kunye ne-Sunshine & Sparkle.
Ke xa kuziwa kuzo zonke ezinye iindlela ezinokukhanya, loluphi ukhetho olufanelekileyo? URichards ugxininisile: "Xa ujonga izisombululo ezizinzileyo, eyona nto ibalulekileyo kukujonga yonke inkqubo yemveliso, hayi nje iziphumo zokugqibela." Ngale nto engqondweni, nceda ucace malunga nezinto ozenzayo kwaye ukwazi ukuqinisekisa ukuba iimveliso zabo ziyafumaneka. Ivenkile apho ufuna iimveliso ezinokuboliswa ziintsholongwane. Kwilizwe apho kulula ukulandela uxanduva lophawu ngokusebenzisa imidiya yoluntu, kufuneka sithethe malunga nexhala lethu kunye neemfuno zethu. "Nangona kungumsebenzi onzima ukufumanisa ukuba zeziphi iimveliso ezingenabungozi kwiplanethi yethu, endaweni yokubanga iimveliso ezingezizo ezentengiso, sibongoza bonke abathengi abanomdla kunye nabakhathalelayo ukuba bafunde nzulu iinkampani abazixhasayo, babuze imibuzo, kwaye ungaze uwathembe amabango okuzinza komhlaba. ”
Kuhlalutyo lokugqibela, eyona nto ibalulekileyo kukuba njengabathengi, asisazisebenzisi izinto ezidanyazayo zeplastiki, kwaye kufuneka sinike ingqalelo nenani leemveliso esihlala sizithenga. UThompson uthe: "Ndicinga ukuba eyona ndlela yokuzibuza yeyiphi imveliso ekufuneka iqulethe ubumenyemenye kunye nokubengezela." “Ewe kunjalo, kukho iimveliso ezingenakufana ngaphandle kwayo! Kodwa ukunciphisa ukusetyenziswa kwayo nayiphi na into ebomini bethu. Olona phuhliso luzinzileyo olunokuphunyezwa. ”
Apha ngezantsi, imveliso esiyithandayo oyithandayo onokuyithemba kukukhetha okungcono kunye nobulumko kwiplanethi yethu.
Ukuba ufuna ukuvuselela i-ecology yakho kodwa uzive ungazithembi, iPakethe yokuHlola yeBioGlitz inokuhlangabezana neemfuno zakho. Le setethi iqulethe iibhotile ezintlanu zeplastikhi engenanto ye-eucalyptus cellulose glitter ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu, efanelekileyo ukusetyenziswa naphina kulusu. Mane unamathele kwi-algae esekwe kwiglitz Glu okanye esinye isiseko sokhetho lwakho. Amathuba anokuphela!
URituel de Fille, uphawu lwezinto zokucoca, akazange asebenzise i-glitter esekwe kwiplastikhi kwezinye iilekese zakhe, endaweni yoko ukhetha i-shimmer esekwe kumbiwa evela kwiglasi ye-borosilicate ekhuselekileyo kunye ne-mica eyenziweyo. Iswebu somhlaba esibhakabhakeni esimangalisayo singasetyenziselwa ukongeza iintlantsi zokutshintsha kombala kuyo nayiphi na indawo yobuso (hayi amehlo kuphela).
Ukusukela ngo-2017, i-EcoStardust esekwe e-UK ibivelisa islulose-based glitter ehambelana nesityalo, esivela kwimithi ye-eucalyptus ekhule ngokuzinzileyo. Uthotho lwayo lwamva nje, oluchanekileyo kunye neOpal, alunayo i-100% yeplastiki, kwaye luvavanyiwe ukuba lunokutsha ngokupheleleyo kumanzi afreshi, yeyona nto inzima kakhulu kwindalo esingqongileyo. Nangona iimveliso zayo ezindala zinama-92% eplastiki, zisenokubakho kakhulu (nangona kungenjalo) zinokuboliswa ziintsholongwane kwimeko yendalo.
Kulabo bafuna ukubengezela kancinci ngaphandle kokusebenzisa gwenxa, nceda ujonge obu bumenemene buqaqambileyo kunye nomlomo ocengacengayo ovela e-Beautycounter. I-brand ayifumani nje kuphela i-mica enoxanduva kwizinto ezikhazimlayo ezisekwe kwiplastikhi kuyo yonke imveliso yayo, kodwa ikwazama ngenkuthalo ukwenza umzi-mveliso we-mica ube yindawo ebonakalayo nesesikweni.
Nokuba awukuthandi ukubengezela, ungaphumla kwibhafini ebengezelayo. Ewe kunjalo, njengesinki yethu, ibhafu yethu ibuyela ngqo kumanzi, ngoko ke kubalulekile ukugcina engqondweni uhlobo lwemveliso esiyisebenzisayo ukucwina usuku. I-Lush inika imveliso isicwebezelisi se-mica eyenziweyo kunye ne-borosilicate endaweni ye-glitter ye-mica yendalo kunye ne-gloss yeplastiki, ukuze ukwazi ukuphefumla ngokulula kuba uyazi ukuba ixesha lokuhlambela alinabungozi bokusingqongileyo kuphela, kodwa linokuziphatha okuhle.
Ngaba ujonge ubukhazikhazi obucekeceke, hayi ubuqaqawuli obumfutshane? I-Aether Beauty's Supernova eqaqambileyo ayigqibeki. Usiba lusebenzisa imicah efanelekileyo yokuziphatha kunye needayimani ezaphukileyo ezityheli ukukhupha ukukhanya kwegolide kwehlabathi.
Okokugqibela, into eyenza usetyenziso lwe-sunscreen lube mnandi! Esi sikrini se-SPF esingamanzi esingama-30 + sifakwe kwi-botanicals eyondlayo, ii-antioxidants kunye nedosi esempilweni ye-glitter endaweni yeplastiki. I-brand iqinisekisile ukuba i-glitter yayo yi-100% ye-biodegradable, ethathwe kwi-lignocellulose, kwaye iye yavavanywa ngokuzimeleyo ukuthotywa emanzini amatsha, amanzi anetyuwa, kunye nomhlaba, kungoko iziva ilungile xa ibekwe engxoweni yolwandle.
Ukuba ufuna ukufumana iinzipho zakho zilungele iholide, cinga ukusebenzisa ikiti entsha yeholide evela kwindawo ecocekileyo yokhathalelo lweenzipho iNailtopia. Njengoko uphawu luqinisekisile, zonke izinto ezimenyezelayo ezisetyenzisiweyo kule mibala yohlelo olunomda ziyi-100% yokubola kwaye ayiqulathanga plastiki. Ndiyathemba ukuba ezi zithunzi zimenyezelayo zibe yinto esisigxina kulungelelwaniso lwegama.